Nzụlite kachasị mma maka mbugharị si Pixar, Marvel, The Simpsons | Gam akporosis
Kacha mma kwalite iche n'ihi na gị video oku na mbugharị
Oge erugo igosi gị usoro mebere na akwụkwọ ahụ aja maka ndị na video oku na ị na-eme na bia. Ọ bụ ezie na ọrụ a na-aga n'ihu na ịkpalite mbipụta nke nzuzo, ọtụtụ nde ndị ọrụ ka na-eji ya maka nhọrọ ya dị egwu.
Otu n'ime ha, ma e wezụga ikwe ka a njikọ dị mfe ma ọ bụ tinyekwuo ndị ọrụ na oku vidiyo (ihe WhatsApp depụtaghachiri na nwelite ikpeazụ ya), ọ bụ usoro ndabere nke anyị nwere ike iji na njikọ vidiyo ndị ahụ na-arụ ọrụ ma ọ bụ ndị anyị hụrụ n'anya. Anyị ga-egosi gị ụfọdụ ego a na-ahụ anya nke ụlọ ọrụ dịka Studio Ghibli ma ọ bụ ndị okike nke Evangelion na-ekerịta.
1 Studio Ghibli mebere akwụkwọ ahụ aja
2 Mebere ahụ aja na akwụkwọ ahụ aja nke Neon Genesis Evangelion
3 Ezigbo ego maka ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ
4 PIXAR mebere ego
5 The mebere iche nke Fox na The Simpsons
6 Iju anya na ego ya
7 Netflix na ego ya
Studio Ghibli mebere akwụkwọ ahụ aja
Studio Ghibli, ụlọ ọrụ ihe nkiri ndị Japan nke dị n'etiti ụfọdụ fim nwere Princess Mononoke ma ọ bụ mmụọ mmụọ, na-akọrọ a usoro nke 8 mebere akwụkwọ ahụ aja n'ihi na ị na-eji na video oku nwere ike mere na Mbugharị; anyi aluru gi zi -esi mee ka a video ogbako na a na ngwa nzọụkwụ site nzọụkwụ.
una usoro nke 8 elu àgwà na akwụkwọ ahụ aja na na ìhè kwesịrị ekwesị ha nwere ike ịdị mma.
Budata - Studio Ghibli
Mebere ahụ aja na akwụkwọ ahụ aja nke Neon Genesis Evangelion
Neon Genesis Evangelion nwekwara usoro nke usoro dị iche iche maka oku vidiyo gị. N'ụzọ ezi uche dị na ya, anyị nọ n'ụdị isiokwu ọzọ maka ọdịnihu na manga. Anyị gafere gị na njikọ ahụ iji budata ya, n'ihi na ọ bụrụ na anyị emeghị, anyị ga-atụfu ibu nke akwụkwọ a ọ ga-abụ nnukwu ibu.
Download - Mgbasa Ozi Ọma nke Evangelion
Ezigbo ego maka ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ
Site Unsplash, a ghọtara free na-emeghe isi foto ọrụ, anyị nwere ike ịnweta a dum usoro nke ihe karịrị 1.000 mebere ndabere na ihe ọkachamara isiokwu na azụmahịa. Ndị a nwere ike inyere anyị aka ma ọ bụrụ na anyị nwere vidiyo vidiyo na klas anyị na-esi nri ma ọ bụ maka nzukọ ndị otu ụlọ ọrụ anyị. Omenala karịa, mana ọtụtụ chọrọ ya nke ọma.
Download - Akwụkwọ ahụaja maka Mbugharị maka ndị ọkachamara
PIXAR mebere ego
Na nnukwu PIXAR na ihe nkiri ndị ahụ dị oke ọnụ dị ka Akụkọ egwuregwu o Up, na-ewetara anyị nnukwu ọnọdụ dị iche iche a maka Mbugharị yana ị nwere ike ibudata n'okpuru na Twitter nke ha. Mepee onyonyo a na taabụ ọhụrụ ma ị nwere ike ibudata ya.
Cheta na onyonyo niile ibudatara na Twitter ị ga-agafe ha ka JPG na a omume dị ka agba maka Windows na otú bia mara ha mgbe itinye ha n'ime ya mebere ndabere.
Na nke a ị nwere ike budata ha na JPG site na gallery anyị na 1920 x 1080 mkpebi site na ịpị ha na «ịzọpụta oyiyi».
Iji ọkacha mmasị gị Pixar ebe… na karịrị! Ka ihe ọchị bido na mgbọrọgwụ ndị a ', tootin' video call backgrounds! pic.twitter.com/xidQ5thBn4
- Pixar (@igbo) March 30, 2020
The mebere iche nke Fox na The Simpsons
Simpsons na-abịakwute anyị site na Fox ya na ihe ndi ozo mara nma nke bia, obu ezie na ha enweghi anya PIXAR. Ọ dabere na otu ịchọrọ inye nnọkọ vidiyo ndị ahụ ma ọ bụ sonye na ha na ego ndị a, mana eziokwu bụ na o siri ike ịhọrọ otu. Simpsons ma ọ bụ Family Guy na-emetụkwa ụda olu na-atọ ọchị. Also nwekwara ha ka ha budata na Twitter dịka nke gara aga, ebe ọ bụ na FOX bipụtara ha na akaụntụ gị.
I nwere ike ibudata ha ndabere dị na JPG site na ihe oyiyi anyị ma ọ bụ na JFIF si Twitter n'okpuru.
Mkpa a @IGIHE ihe ndabere maka nzukọ gị?
Enwere m gị fam. pic.twitter.com/PBsac0P36X
- Fox (@FOXTV) March 23, 2020
Iju anya na ego ya
Ọ bụrụ na anyị achọworị inwe usoro dị egwu na ụdị dike na ihe nkiri Marvel, ọ bụ otu ihe ahụ ewerela akaụntụ Twitter ya ịkesa Fable 4. Ezigbo ezi uche ma nke ahụ na-akpọrọ anyị gaa na ụwa ijuanya inye onyinye vidiyo anyị na isi ihe ọzọ dị nnọọ iche na ndị ọzọ.
Video oku nzụkọ, gbakọta! Na-ejegharị Eluigwe dị ịtụnanya: https://t.co/msMUpoZG3E pic.twitter.com/9v1opZaALL
- Ụtọ Ntụrụndụ (Ụdị) April 3, 2020
Netflix na ego ya
Ma eleghị anya, ọ ga-efu anyị ihe mara usoro ha so na ụfọdụ n'ime ego ndị a mebere emepe, mana n'ezie ndị hụrụ ọtụtụ ga-amata ha. Otu n'ime ha sitere na nsonso "and" na onye ahụ na-akpali akpali na ọ kacha mma ịhụ onye dị ka ya nso. Maka ihe niile masịrị gị, yana ndị nke Netflix sitere na akaụntụ Twitter gị.
ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ọhụrụ @IGIHE ndabere ... pic.twitter.com/M6HPUwFEua
- Netflix (@netflix) March 24, 2020
una usoro nke mebere nsio maka vidiyo gị na oku na Mbugharị nakwa na site ugbu a gawa, ha ga-abụ ndị otu onye ezinụlọ gị ma ọ bụ onye ahụ gị na ya na-arụkọ ọrụ mụmụọ ọnụ ọchị. Echefula ha, n'ihi na ha niile dị ebube.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Kacha mma kwalite iche n'ihi na gị video oku na mbugharị
MAURICIO XAVIER dijo
Zaghachi MAURICIO JAVIER
Nubia Red Magic 5G bịarutere Spain: Nnweta na ọnụahịa